Uvuko—Yintoni Enokukwenza Uqiniseke Ngalo?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Ngaba bubudenge ukucinga ukuba abafi banokuphila kwakhona? Umpostile uPawulos wayengacingi njalo. Ephefumlelwe wabhala wathi: “Ukuba besithembele kuKristu kobu bomi kuphela, singabona bokusizelwa kubantu bonke. Noko ke, uKristu uvusiwe kwabafileyo, intlahlela kwabalele ekufeni.” (1 Korinte 15:19, 20) Yayikukuvuswa kukaYesu okwaqinisekisa uPawulos ukuba uvuko luza kubakho. * (IZenzo 17:31) Yiloo nto uPawulos wabiza uYesu njengentlahlela, kuba waba ngowokuqala ukuvuselwa kubomi obungenasiphelo. Ukuba uYesu waba ngowokuqala ukuvuswa, kucacile ukuba bakho nabanye abaza kuvuswa.
UYobhi wathi kuThixo: “Uya kuwulangazelela umsebenzi wezandla zakho.”—Yobhi 14:14, 15
Nasi esinye isizathu sokuqiniseka ngethemba lovuko. UYehova nguThixo wenyaniso. ‘UThixo akanakuxoka.’ (Tito 1:2) UYehova zange waxoka, ibe akasoze axoke. Angasithembisa ngovuko ade asibonise nendlela aza kulwenza ngayo, kanti akazi kusenza eso sithembiso? Unotshe!
Kwakutheni ukuze uYehova enze ilungiselelo lovuko? Kungenxa yokuba esithanda. UYobhi wabuza: “Ukuba indoda eyomeleleyo iyafa ngaba inokuphila kwakhona? Uya kubiza, ndisabele. Uya kuwulangazelela umsebenzi wezandla zakho.” (Yobhi 14:14, 15) UYobhi wayeyisekile ukuba uBawo onothando wasezulwini wayekulangazelela ukumvusa. Ngaba utshintshile uThixo? “NdinguYehova, anditshintshanga.” (Malaki 3:6) UThixo usakulangazelela ukubona abafi bebuyela ebomini kwakhona, besempilweni yaye bevuya. Nawuphi na umzali onothando oswelekelwe ngumntwana angakuvuyela oku. Umahluko kukuba uThixo unawo amandla okukwenza.—INdumiso 135:6.
Ukufa yingxaki ekhathazayo, kodwa uThixo unesicombululo
UYehova uza kunika uNyana wakhe amandla okuzisa imincili kwabo baye baba sentlungwini yokuswelekelwa ngabantu ababathandayo. UYesu yena uvakalelwa njani ngovuko? Ngaphambi kukuba avuse uLazaro, uYesu wabona intlungu yodade boLazaro nezihlobo zakhe, zaza “zathi waxa iinyembezi” kuye. (Yohane 11:35) Kwesinye isihlandlo, uYesu wadibana nomhlolokazi waseNayin owayeswelekelwe ngunyana okuphela kwakhe. ‘Waba nosizi ngaye, waza wathi kuye: “Musa ukulila.”’ Waza wamvusa lo mfana ngoko nangoko. (Luka 7:13) Ngoko ke, uYesu uba nosizi gqitha xa sifelwa. Uza kuvuya ngeyona ndlela ingathethekiyo xa ejika intlungu ibe luchulumanco emhlabeni ngokubanzi!
Wakha wafelwa ngumntu omthandayo? Usenokucinga ukuba ukufa yingxaki engenasicombululo. Kodwa sikho, luvuko oluza kuziswa nguThixo esebenzisa uNyana wakhe. Ukhumbule ukuba uThixo ufuna uzibonele eso sicombululo. Ufuna ubekho, uze wamkele abantu obathandayo kwakhona. Khawufan’ ucinge, nilungiselela ukuphila ubomi obungenasiphelo kunye, ningaphindi nahlukane kwakhona!
ULionel ebesithethe ngaye ekuqaleni uthi: “Ekugqibeleni ndafunda ngovuko. Ekuqaleni, kwakunzima ukulukholelwa, kuba ndandingamthembi umntu owayendixelela ngalo. Kodwa ndazijongela eBhayibhileni ndaza ndazibonela ukuba ziyinyaniso! Andikwazi nokulinda oku ukuze ndimbone kwakhona utamkhulu wam.”
Awungethandi ukwazi okungakumbi? AmaNgqina kaYehova angakuvuyela ukukubonisa kweyakho iBhayibhile isizathu sokuba eqinisekile ukuba kuza kubakho uvuko. *
^ isiqe. 3 Ukuze ufumane ubungqina bokuvuswa kukaYesu, funda incwadi ethi: IBhayibhile—Ngaba Ililizwi LikaThixo Okanye Lomntu? iphepha 78-86, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
^ isiqe. 9 Nceda ufunde isahluko 7 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Intlungu yokuphulukana neqabane iyamngcungcuthekisa umntu yaye ithatha ixesha. Cinga ngendlela ithemba lovuko elifumaneka kwiLizwi likaThixo elingumthombo wentuthuzelo ngayo.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela IMBONISELO Agasti 2015 | Ngaba Abafileyo—Bangaphila Kwakhona?